Ilay 37 taona no teo amin’ny familiana ny môtô. Tsy fantatra anefa izay tena nahazo azy ireto, fa avy hatrany dia nanintsy nivarina tany anaty hantsana izy ireo, izay efa ho fito metatra ny halaliny, tokony ho tamin’ny 1 ora sy fahefany tao Ambohitonelina, akaiky an’Ambatofotsy, amin’ny lalam-pirenena fahafito iny.
"Tahaka ny tsy nihinana ny hisatra ka tsy tafajanona intsony ny môtô", hoy ilay nitondra azy. Olona mipetraka akaiky ilay toerana no namonjy sy nitondra azy ireo notsaboina tany amin’ny hôpitaly Hjra, eny Ampefiloha.
Eo am-piandrasana valin’ny fitarafana izy ireo, fa tahaka ny misy tapaka ny felatanan’ilay nitondra ny môtô, amin’ny ilany havia. Mandringa, misy marary azey koa ao amin’ny tongony iray.
Ilay faharoa kosa no tena voa mafy fa any amin’ny hazon-damosina no voakasika.
"Tsy mandre na inona na inona intsony ny tapany ambany amin’ny vatany. Maty misy taolana tapaka na tapaka mihitsy ny tsokan-damosina", hoy ny fanazavana nomen’ilay nitondra môtô. Ilay fitaovana kosa voalaza fa potika tanteraka taorian’ny fianjerany tao amin’ilay hantsana.